Mangarano – Toamasina : jiolahy roa nahatrarana vola sandoka 4 tapitrisa Ar | NewsMada
Mangarano – Toamasina : jiolahy roa nahatrarana vola sandoka 4 tapitrisa Ar
Saron’ny polisy misahana ny heloka bevava tao Mangarano Toamasina, ny talata teo ireo jiolahy roa voarohirohy ho nahatrarana vola sandoka mitentina 4 tapitrisa Ar. Mpivarotra maromaro ao Toamasina no efa nanaparitahan’izy ireo izany…
Velon-taraina ny ankamaroan’ny mpivarotra ao an-drenivohitr’i Toamasina amin’ny fisian’ny vola sandoka miparitaka eny an-tsena. Voalaza fa mpanamparitaka izany ireto jiolahy ireto ka rehefa amin’ny alina ny anaovan’izy ireo izany. Nitaraina toy izany koa ireo tantsaha mpivarotra jirofo sy lavanila noho fahazoan’izy ireo vola sandoka. Nametraka fitoriana teny amin’ny polisy araka izany ireo mpivarotra naharay vola sandoka ireo. Vokany, ny talata 20 desambra 2016 lasa teo nahazo loharanom-baovao ny polisy misahana ny heloka bevava amin’ny fisian’ny toerana fitahirizana vola ao Mangarano. Nambaran’ilay loharanom-baovao hatrany fa misy olona hampiditra vola amin’io toerana io, saingy tsy mazavazava ilay vola kanefa volabe. Ny andro efa hariva tamin’io fotoana io kanefa ry zalahy mitondra ilay vola tsy manaiky fa hoe tsy maintsy harotsaka izany vola izany. Tonga teny an-toerana tokoa ny polisy tamin’io fotoana io ka noraisim-potsiny ireo jiolahy antsoina hoe Randriarimanana Jacques Sylvio, 25 taona sy i Nantenaina Hendrix, 26 taona. Tafatsoaka kosa ny namany iray antsoina hoe Ralisy.
Efa maro, araka izany, ny vola sandoka miparitaka ao Toamasina manoloana ny fisian’ireto mpanaparitaka vola sandoka ireto. Fantatra tamin’ny alalan’ny loharanom-baovao iray fa misy olona ambony miaro ireto mpanakalo sy mpanamparitaka vola sandoka ireto.